ग्लोबल सहकारीको ७९ गाविसमा कार्यक्रम बिस्तार - inaruwaonline.com
ग्लोबल सहकारीको ७९ गाविसमा कार्यक्रम बिस्तार
प्रकाशित मिति: शनिबार, आश्विन १५, २०७३ समय: १०:२७:४९
ग्लोबल सहकारी संस्थाले आयोजना गरेको साधारण सभा तथा सहभागीहरु ।
१५ असोज, दिलिप साह राजविराज । १६ वर्षमा ग्लोवल वहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड राजविराजले चार नगरपालिका सहित ७९ गाविसमा कार्यक्रम बिस्तार गरेको छ । जिल्लाको ९१ मध्ये ६७ गविस र ४ वटा नगरपालिकामा संस्थाको कोष र विभिन्न दातृ निकाय एवं वैंकहरुको वित्तिय सहयोगमा सो कारोबार गरेको हो । ग्लोबलको आयोजित १६ औं वार्षिक साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष भोलारमण उप्रेतीले सहकारीका सवै सदस्य र कर्मचारीको मेहनत सेवा भावकै कारण सफलता मिलेको वताउनुभयो ।
बि.स. २०५७ साल कार्तिक ९ गते स्थापित २९ जना सदस्यबाट सुरु गरेको ग्लोबलमा अहिले १७ हजार २ सदस्य पुगेको छ । साधारण सभामा अध्यक्ष उप्रेतिले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै र २०५७ सालमा २९ जना सदस्यहरु मिलेर रु.२२ लाख ९३ हजार शेयर पूँजीवाट संचालन गरिएको हालको शेयर पूँजीमात्र रु. एक करोड दुई लाख ९३ हजार ५ सय पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सदस्य संख्या १७ हजार पुगेको बताउँदै अध्यक्ष उप्रेतीले संस्थाले गत आव ०७२÷०७३ मा रु. सात करोड नौ लाख दुई हजार नौ सय निक्षेप संकलन गरेको बताउनुभयो । यस्तै रु. छ करोड २९ लाख पाँच हजार एक सय ६१ निक्षेप फिर्ता गरेको छ । यसैअवधिमा रु. तीन करोड ३४ लाख ४५ हजार आठ सय एक लागनी गरी कुल रु. १३ करोड आठ लाख ३१ हजार ९ सय पाँच कारोवार गरेको उक्त संस्थाले आव ०७२÷०७३ मा रु. ११ लाख ३५७ खुद मुनाफा गरेको छ ।
सो अवसरमा संस्थाका व्यवस्थापक अमिर यादवले सप्तरीमा १७ हजार सदस्य भएको सहकारी संस्था पहिलो भएको दावी गर्दै चालु आव ०७३÷०७४ मा २५ हजार सदस्य संख्या पुर्याएर देशकै ठूलो सहकारी संस्था वनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । साधारण सभामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका केन्द्रिय अध्यक्ष रमेश पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याए वापत डा. डिकनाथ यादव, जनस्वास्थ्य प्रमुख विजयकुमार झा, नेपाल बातावरण पत्रकार समुहका श्रीलाल साह तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सप्तरीका संयोजक विश्वनाथ मण्डललाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गर्नुभयो ।
यसअघि वार्षिकोत्सवका अवसरमा संस्थाद्वारा निकालिएको सदभाव ¥याली नगर परिक्रममा पश्चात जिल्ला विकास समितिको सभाकक्षमा साधारण सभाका सहभागिमा परिणत भएको थियो । मुठिया बचतले चर्चित सो सहकारीमा अधिकाँश महिला सदस्यहरु नै रहेको संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादवले जानकारी दिनुभयो ।